ललितपुरमा आत्महत्या गर्ने संख्या बढ्यो, बालबालिका समेत शिकार - Dainikee News::
ललितपुरमा आत्महत्या गर्ने संख्या बढ्यो, बालबालिका समेत शिकार
रामहरि कार्की/ललितपुर, साउन ३ । ‘म धेरै दुःखमा छु मलाई कसैले माया गर्देन । कक्षामा केटाहरुलाई पिट्ने र केटीहरुलाई नपिट्ने सर र म्याम र घरमा मलाई दाइ भाउजुले हेला गर्छन त्यही भएर बाच्न मन लागेन ।’ ललितपुरको बागमती गाउँपालिका वार्ड नम्बर दुई माल्टाका ११ वर्षीय बालकले आत्महत्या गर्नुअघि लेखेको सुसाइड नोटमा लेखिएका शब्द हुन यी । माल्टास्थित कालीदेवी माध्यमिक विद्यालयको कक्षा ५ मा अध्ययनरत ११ वर्षिय समिर लुङ्वाले घरपरिवार र विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाबाट माया नपाएको भन्दै नोट लेखेर मृत्यु रोजे ।
आफूलाई कसैले माया नगरेपछि बाच्न मन नलागेको उनले सुसाइड नोटमा लेखे तर त्यो कलिलो उमेरमा आत्महत्या गर्ने कुरा उनको दिमागमा कहाँबाट आयो ? यो प्रश्नको जवाफ पाउन अब कठिन छ । कारण उनको मृत्यु भइसकेको छ । बालक लुङ्वाले आफू बिरामी हुँदा पनि सर र मिसहरुले बिरामी भएको कुरा नपत्याउने र घरमा राम्रो माया नपाएको जस्ता कारणले संसारबाट विदा माग्न परेको उल्लेख गरेका छन ।
ऊनी मात्रै होइन पछिल्ला दिनहरुमा जिल्लामा पारिवारिक कलहकै कारण आत्महत्या गर्ने संख्या बढेको देखिन्छ । महानगरीय प्रहरी परिसर जावालाखेलले जिल्लाभर रहेका प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका आत्महत्या सम्बन्धि घटनाहरु हेर्दा जिल्लाभर २०७२ देखि २०७६ को जेठ महिनाको अन्तिमसम्म ३४७ जनाले आत्महत्या गरेको र आत्महत्या बढी हुनुमा पारिवारिक कलह मुख्य कारक रहेको देखाएको छ ।
चार वर्षको अवधिमा आत्महत्या रोज्नेमध्ये ११४ जनाले पारिवारिक कलहकै कारण आत्महत्या गर्न बाध्य भएको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि ८३ जनाले पढाइ लगायतमा असफलता भोगेको कारण आत्महत्या गरेको प्रहरी रेकर्डमा उल्लेख छ । चार वर्षको अवधिमा ६८ जना प्रेममा असफल भएका कारण मृत्युवरण गरेको देखिन्छ । ४३ जनाले मानसिक रोगकै कारण आत्महत्या गरेको र ३८ जनाले आर्थिक कारणले आत्महत्या गरेका छन । २६ जनाले सामाजिक समस्याका कारण मृत्यु रोजेका छन ।
एघार वर्षका समीर लुङ्वा जस्तै जिल्लामा आत्महत्या गर्नेमा सबैभन्दा बढी जनजाति समुदायका देखिन्छन् । चार वर्षको अवधिमा महिला र पुरुष गरी १९२ जना जनजाती समुदायका व्यक्तिहरुले आत्महत्या गरेका छन । यो अवधीमा ७३ जना क्षेत्री र ५३ जना ब्राह्मण समुदायका व्यक्तिहरुले आत्महत्या गरेको पाइन्छ भने २७ जना दलित समुदायका रहेका महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेलका प्रवक्ता डिएसपी नारायणप्रसाद चिमौरियाले जानकारी दिए ।
समीर लुङ्वा जस्तै जिल्लामा झुण्डिएर आत्महत्या गर्नेको संख्या सबैभन्दा धेरै रहेको देखिन्छ । आत्महत्या गर्ने ३४७ जनामा २३२ जना त झुन्डिएका छन । यो संख्या आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा सबैभन्दा बढी देखिन्छ । प्रहरी कार्यालयमा यो अवधिमा दर्ता भएका जम्मा ९३ घटनामा ६६ जनाको झुण्डिएर मृत्यु भएको देखिन्छ । यस्तै पढाइ लगायत विभिन्न क्षेत्रमा असफल भएर ४९ जनाले सोही अवधिमा आत्महत्या गरेका छन । तर विष सेवन गरेर आत्महत्या गर्ने संख्या भने २०७३–०७४ मा भन्दा घटेको छ । उक्त अवधीमा विष सेवन गरेर ३१ जनाको मृत्यु भएकोमा २०७४–०७५ मा २२ जनाले विष सेवन गरेर आत्महत्या गरेका छन । २०७६ को जेठ मसान्तसम्म पनि २२ जनाले नै विष सेवन गरेर आत्महत्या गरेका छन् । चार वर्षमा दर्ता भएका जम्मा ३४७ घटनामा २०१ पुरुषले आत्महत्या गरेका छन । त्यसमा पनि २०७२–२०७३ मा सबैभन्दा बढि ५४ जना पुरुषले आत्महत्या गरेका थिए ।
जिल्लाभर ४ वर्षमा १४३ जना १५ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका ब्यक्तिले आत्महत्या गरेका छन ।
लगातार जिल्लामा आत्महत्या बढेको घटनाले चिन्तित प्रहरी त्यसको कारण खोज्न सक्रिय छ । किशोरी अवस्थामै झुण्डिनु अझ छोराछोरी सहित परिवारै आत्महत्या गर्नु गम्भीर समस्या हुनसक्ने प्रहरीको विश्लेषण छ तर महानगरीय प्रहरी परिसर जावालाखेलका प्रवक्ता डिएसपी चिमौरियाले २०७२ सालमा गएको भूकम्पको असर मानसिक रुपमा परेको हुनसक्ने बताए । घरेलु हिंसा आत्महत्याको मुख्य कारण भए पनि कमजोर आर्थिक अवस्था, सनक, तीव्र रुपमा परिवर्तन हुने मानसिक कारण पनि यस्ता घटना बढेको हुन सक्ने प्रवक्ता चिमौरियाको भनाई छ । यसका अलवा निको नहुने रोग लाग्नु, पश्चिमा समाजको सिको, मदिरा सेवन, प्रेममा धोका, लागु औषध दुव्र्यसनी, उदासीपन, शिक्षाको कमीले गर्दा पनि झुण्डिएर आत्महत्या गरेको हुन सक्ने उनले बताए ।
चिमौरियाको भनाईमा समर्थन जनाउँदै ग्राण्डी हस्पिटलका मनोचिकित्सक डा. रिसव कोइराला पनि पछिल्लो दिन बालबालिकाहरुले आत्महत्या गर्नुको कारण डिप्रेसन, आवेग र देखासिकी रहेको बताउँछन् ।
ललितपुरको ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यालय भएपनि पारिवारिक वातावरण शिक्षामैत्री, उत्पेरणा दिने खालका नहुनु, छोराछोरीलाई कामका लागि मात्रै प्रयोग गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले मानसिक रुपमा विछिप्त बनाएको हुनसक्ने डा. कोइरालाको भनाइ छ । त्यसका अलवा आफ्ना अभिभावकहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशीने कारण शहरभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी आत्महत्या हुने गरेको उनले बताए ।
आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्ने, घरपरिवारको एक सदस्यले आत्महत्या गरेमा उसको परिवारमा भविष्यसम्म पर्न जाने असरको बारेमा संचार माध्यम मार्फत जानकारी गराउनुपर्ने सुझाव दिन्छन महानगरीय प्रहरी वित्त सातदोबाटोका डिएसपी गौतम मिश्र । डिप्रेशनमा रहेका व्यक्तिलाई सकारात्मक परामर्श दिनुपर्ने, घरपरिवारका सदस्यहरुले एक अर्काको समस्या सुन्ने र आपसी समन्वय एवं सहयोगको भावना राख्ने व्यवहार गर्नुपर्ने सुझाव पनि मिश्रको छ ।
प्रहरीले आत्महत्या रोक्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम अघि बढाएपनि त्यसमा कमी आउन सकेको देखिदैन । झन बालकले समेत सोही बाटो अपनाउन थालेपछि यसको बारेमा सम्बन्धित निकाय सजग रहनु पर्ने देखिन्छ । नत्र राम्रै पढ्ने अनि भविष्यका मिठा सपना सजाएको व्यक्तिको सपना मात्रै मर्दैन त्यो सँगै थुप्रै सम्भावना पनि मर्नेछ । एघार वर्षको उमेरमै चम्किलो दियो निभेपछि समाजमा त्यसले कस्तो प्रभाव पार्ला ! हेक्का राख्नै पर्छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ३, २०७६ /Friday, July 19th, 2019, 11:49 am